Semalt एसईओ बेफाइदामा बोल्छ खोज कन्सोल प्रयोग गर्दा तपाईले पाउनुहुनेछ
Semalt SEO लाभहरू मा बोल्छ जब तपाइँ खोजी कन्सोल प्रयोग गर्नुहुनेछ
गुगल खोजी कन्सोलले गुगल खोज ईन्जिनहरूमा तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछ। तपाइँ HTML वा प्रोग्रामिंग जान्नु आवश्यक छैन। तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको संरचना, वेबसाइटको सामान्य संरचना विश्लेषण गर्नु हो र तपाईं परिवर्तनहरू गर्न डराउनुहुनेछैन। यो सानो प्रयास खोजी परिणाममा तपाइँको वेबसाइटको स्थिति सुधार गर्न मा धेरै मद्दत गर्दछ।
अर्गानिक ट्राफिक (प्रभाव र क्लिकहरू)।
पृष्ठ अनुक्रमणिका स्थिति, पृष्ठमा त्रुटिहरू सहित, मोबाइल संस्करणमा।
थप रूपमा, एससीमा हामी गुगलले लगाएको दण्डहरू, भाइरसहरू वा ह्याकरहरूको हमलाको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्छौं। यस उपकरणले खोजी ईन्जिनहरूको मोडरेटर, एल्गोरिदमहरू र वेबमास्टरको बीचमा सञ्चार सक्षम गर्दछ।
वेबसाइटको प्रत्येक प्रशासकले यसको कार्यान्वयनको लगत्तै Google खोजी कन्सोल लागू गर्नुपर्नेछ। एससी, गुगल एनालिटिक्स जस्ता, ट्रैकिंग कोड वेबसाईटमा थपिएको क्षणदेखि नै वेबसाइटको ट्राफिकलाई निगरानी गर्दछ, त्यसैले यो सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ। हालको संस्करणमा, हामी १ 16 महिना पछाडि डेटा विश्लेषण गर्न सक्छौं। यदि तपाईं अहिले आफ्नो साइटको लागि एसईओको बारेमा सोच्नुहुन्न र तपाईंलाई जीएससी चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन भने पनि, यो तपाईंको वेबसाइटमा थप्न लायक छ किनकि यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र उपकरण हो। भविष्यमा, जब तपाईं एसईओ गतिविधिहरूमा निर्णय लिनुहुन्छ, यस समयमा खोजी कन्सोलले संकलन गरेको डाटा वेबसाइटको अप्टिमाइजेशनमा ठूलो सहयोगी हुनेछ।
यो गर्नको लागि तपाईलाई जीमेल खाता चाहिन्छ।
जाऊ त्यहाँ https://search.google.com/search-console/welcome र तपाईंको ईमेलमा लग ईन गर्नुहोस्। त्यसो भए माथिल्लो बायाँ कुनामा तपाईले नयाँ सेवा थप्न विकल्प फेला पार्नुहुनेछ।
गुगल खोजी कन्सोलले २ प्रकारका वेबसाइट सेवाहरू समर्थन गर्दछ: डोमेन सेवा र यूआरएल उपसर्ग सेवा। डोमेन-स्तर सेवाले सबै सब-डोमेनहरू साथै बहुविध प्रोटोकलहरू (http, https वा ftp) लाई समेट्छ। यसको विपरीत, यूआरएल उपसर्गको साथ सेवाले प्रोटोकल (HTTP/https) सहित, विशिष्ट उपसर्ग सहित यूआरएलहरू मात्र समेट्छ। छनौट तपाईको हो, तर तपाईले यो याद गर्नुपर्दछ कि एससीको लागि http र https वेबसाइट दुई फरक डोमेनहरू हुन्। थप रूपमा, SSL प्रमाणपत्र लागू गरेपछि, तपाइँले वेबसाइट नयाँ सेवाको रूपमा थप्नु पर्छ। तपाईं गुगलमा सेवाहरूको बिभिन्न प्रकारहरू बीचका भिन्नताहरूको बारेमा बढि पढ्न सक्नुहुन्छ कन्सोल मद्दत केन्द्र खोजी गर्नुहोस्।
पृष्ठमा मेटा ट्याग थपे पछि, तपाईं प्रमाणिकरण पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। सेवा को बारे मा डेटा केहि दिन पछि देखा पर्नु पर्छ। र तयार! तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, गुगल खोज कन्सोलमा वेबसाईट थप्ने काम सजिलो छ। व्यक्तिगत प्रमाणीकरण विधिहरूमा विस्तृत जानकारी एससी सहायता केन्द्रमा फेला पार्न सकिन्छ।
माथिबाट, हामीसँग: सिंहावलोकन, प्रभावकारिता, सुधारहरू, सुरक्षा र म्यानुअल कार्यहरू, पुराना उपकरणहरू र रिपोर्टहरू।
सिंहावलोकन सेक्सनमा, तपाइँ तपाइँको साइट को सारांश प्राप्त, कि, वेब खोज, साइट को स्थिति र सम्भावित सुधार गर्न सम्बन्धित क्लिकको कुल संख्या। प्रत्येक चार्टबाट, तपाई क्लिक गरेर अझ विस्तृत विश्लेषणमा जान सक्नुहुन्छ "खुला रिपोर्ट"। यो तपाईं लाई Google मा पृष्ठ को स्थिति को लागी प्रासंगिक व्यक्तिगत तत्व ट्र्याक गर्न अनुमति दिनेछ।
यस तरिकाले, तपाईं जाँच गर्न सक्नुहुनेछ कि कसरी खोजी ईन्जिनमा पृष्ठको दृश्यता आकार थियो, चाहे जैविक ट्राफिक र दृश्यहरू खस्किरहेका छन् वा बढ्दै छन्, आदि।
खोज कन्सोलको अर्को आवश्यक सुविधा तपाईंको वेबसाइटको स्वास्थ्य मोनिटर गर्ने क्षमता हो। यस सेक्सनमा तपाईले आफ्नो साइटमा त्रुटिहरूको बारेमा जानकारी पाउनुहुनेछ।
जान्न लायकको अर्को सुविधा डिलीसनहरू हो। यसले तपाईंलाई अस्थायी रूपमा विशिष्ट URL हरू लाई खोज इन्जिनमा करिब6महिनाको लागि रोक्न अनुमति दिन्छ। यो सुविधा कहिले प्रयोग गर्ने र किन हामी अस्थायी रूपमा सर्च कन्सोलमा URL हरू हटाउन आवश्यक छ?
तपाईं गुगललाई यो पृष्ठ क्रल गर्न भन्न सक्नुहुनेछ, यसको मतलब, यसलाई फेरि भ्रमण गर्न र अन्तिम भ्रमण पछि यसमा आएको परिवर्तनहरू रेकर्ड गर्न।
जीएससी एक एकदम सरल र सहज उपकरण हो जहाँबाट तपाईं आफ्नो वेबसाइटको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारीको धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म तपाइँ वेबसाइटमा कुनै परिवर्तन गर्न वा स्थितिसँग सम्झौता गर्न चाहनुहुन्न भने पनि, तपाइँले तपाइँको वेबसाइट खोज कन्सोलमा थप्नु पर्छ। वेबसाइटमा के भइरहेको छ निगरानी गर्न र नियमित आधारमा सुधारहरू गर्न लायकको छ। यस तरीकाले तपाईले खोज ईन्जिनमा आफ्नो वेबसाइटको दृश्यता बढाउनुहुनेछ। यदि तपाइँसँग एससीको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, कृपया पोष्टको तल टिप्पणी दिनुहोस्!
गुगल खोजी कन्सोलमा साइट साइटम्याप थप्नको लागि, "साइटम्याप" मा जानुहोस्, साइटम्याप ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस् र "सबमिट गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्। पेश गरिएको साइटम्याप तल तालिकामा देखा पर्नेछ। यसले साइटम्यापमा समावेश सबै यूआरएलहरू अपलोड हुनको लागि धेरै दिन लिन सक्दछ।